စပ်မိစပ်၇ာ: February 2012
ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိခဲ့သော ရင်ချင်းဆက်လိပ်အမြွှာကို အများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်ရန် မြို့တော် ကိယက်ဗ်ရှိ သဘာဝသိပ္ပံပြတိုက်တွင် ပြသထားကြောင်း သိရသည်။ ခေါင်းနှစ်လုံး၊ ခြေခြောက် ချောင်းနှင့် လိပ်ဟု ထင်ရှားခဲ့သောလည်း အမှန်တကယ်မှာ ကိုယ်ချင်းဆက်နေသော လိပ်အမြွှာသာဖြစ်ကြောင်း သတ္တဗေဒပညာရှင် ယူရင်ယူရက်ဗ်လီယော့ဗ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 06:280comments
အရပ် တစ်ပေ ၁၀ လက်မသာရှိသော နီပေါအဘိုးအို ကမ္ဘာ့အပုဆုံးအဖြစ် စံချိန်တင်နိုင်တော့မည်
အရပ်တစ်ပေ ၁၀ လက်မသာရှိသော နီပေါနိုင်ငံမှ ချန်ဒရာဗဟာ ဒူးဒန်ဂီဆိုသူ အဘိုးအိုသည် ကမ္ဘာ့အရပ်အပုဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် စံချိန်တင်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 06:240comments
ပြင်ဦးလွင်တွင် အမျိုးသမီးတင်ပါးတွေကို ဓားဖြင့်ထိုးသူဖမ်းမိ
ပြင်ဦးလွင်မြို့ နယ်တွင်း ကိုယ်ခန္ဓာလှပ ထွားကျိုင်းသူ မိန်းခလေးများ၏ တင်ပါးကို
ဓားဖြင့်လိုက်လံထိုးသူ အသက်(၃၀)အရွယ် အမျိုးသားတဦးကို ပြင်ဦးလွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ 
စခန်းက ဖေဖော်ဝါရီလ ဒုတိယအပတ်အတွင်းဖမ်းမိထားကြောင်း အဆိုပါ ရဲတပ်ဖွဲ့ 
စခန်းမှ ရဲအရာရှိတဦးက ပြောကြားသည်။
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 15:590comments
အတင်း​အဓမ္မ ပြည့်​တန်ဆာလုပ်ခိုင်း​သူကို အ​ရေး​ယူရန် အိုင်အယ်လ်အိုထံ တိုင်ကြား
အခင်း ​ဖြစ်ပွား​ပုံက​တော့​ ဧရာဝတီတိုင်း​ ​ကျောင်း​ကုန်း​မြို့​မှာ​နေတဲ့​ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် ၁၀ တန်း​ကျောင်း​သူကို အ​ဒေါ်​တော်စပ်သူက ​ကျောင်း​ထား​ပြီး​ ​ကျွေး​မွေး​ပြုစုမယ်ဆိုပြီး​ ​ခေါ်​ဆောင်သွား​တာပါ။
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 04:172comments
ကိုင်း မြန်မာပြည် စစ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းေ၇း(ကြောက်တတ်သူများမကြည့်၇)
ကျနော်တို့ ပြည်ပေ၇ာက်နေတဲ့သူတွေေ၇ာ ၊ပြည်တွင်းကသူတွေေ၇ာ အကြားချင်ဆုံး စကားကတော့ မြန်မာပြည်ကြီး အေးချမ်းသွားပြီ..မကြာခင် စီးပွားေ၇းတွေ ဖွံဖြိုးပြီ နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာဟေ့ လို့ ဖြစ်လာမယ့်နေ့ ပါ...
တကယ့်လက်တွေ့ မှာတော့ အစိုး၇သစ် လက်ထက်မှာ တိုးတက်တော့မယ့် အ၇ိပ်အယောင်သာ မြင်၇ပေမယ့် အေးချမ်းတာတော့ လက်ရှိချိန်ထိ မအေးချမ်းနိုင်တဲ့ နေ၇ာတွေ ၊ဒုက္ခသည်တွေအဖြစ် ၊ပြေးလွှားနေ၇တာတွေ..တကယ့်ကို စိတ်မကောင်းစ၇ာ မြင်ကွင်းတွေပါပဲ..တနှစ်.တနှစ် နိုင်ငံတော်က ကာကွယ်ေ၇းဘတ်ချက်အဖြစ်သုံးတာ ကျပ်ငွေဘီလျံချီတဲ့ငွေတွေ ဒီငွေတွေ နဲ့ဘယ်သူတွေ့ ၇ဲ့ ၇န်ကိုကာကွယ်နေတာလည်း..တရုတ်တွေ၇ဲ့ ၇န်လား...ယိုးဒယားတွေ၇ဲ့ ၇န်လား..မေ၇ိက က နေေ၇ာက်လာမယ့် ၇န်လား. ဒီကာကွယ်ေ၇း ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည်ပကျူးကျော်သူတွေ ဘယ်နှယောက်နှိမ်နင်းပြီးပြီလည်း(ခုလက်ရှိအချိန်ကိုပြောတာပါ)...
ကျနော်တို့ ဒီကာကွယ်ေ၇းငွေတွေ ကေ၇ာ ဘယ်က၇လဲ..?ကချင်ပြည်နယ်က တနှစ် တနှစ် ကျောက်စိမ်းတွေ ဒေါ်လာ သန်းနဲ့ ချီပြီေ၇ာင်းတာတွေ၊ က၇င်ပြည်နယ် ၊ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်က သစ်တွေေ၇ာင်းတာတွေ ၊၇ခိုင်ပြည်နယ် ၊မွန်ပြည်နယ်က ဂက်စ်တွေ ထွက်တာတွေကနေတဲ့ငွေတွေ ၊ ဒီလို တနှစ် ၊တနှစ် သုံးနေတဲ့ ကာကွယ်ေ၇းငွေတွေနဲ့သတ်ဖြတ်ခြင်းခံနေ၇တာ ၊ဘယ်သူတွေလည်း ?
ဒီလို တိုင်း၇င်းသား ညီကိုတွေပဲ သတ်ခံနေ၇တာ ဟုတ်ဘူးလား
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 00:32 1 comments
အနိဌါရုံမြင်ကွင်းများ ( ပြည်ပ) ကြောက်တတ်သူများမကြည့်၇ ( ၂ )
ကြောက်တတ်သူများနှင့်နှလုံးေ၇ာဂါရှိသူများလုံးဝ (လုံးဝ )မကြည်၇....ထပ်ပြောပါ၇စေ ဒီပိုစ့် တွင်ပါရှိသော ပုံမှာသည် အက်စီးးဒန့်ဖြစ်ပြီ သေကြသော ကြောက်စ၇ာ၊ရွံ့ စ၇ာပုံများဖြစ်ပါစည်..စိတ်မခိုင်သူများမကြည့်၇...
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 05:440comments
ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ နှစ်၂၆၀၀ ပြည့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 02:360comments
သွားနုတ်ချင်၇င် ကိုယ်ဖိ၇င်ဖိ နုတ်ပေးနေပြီနော် ..နုတ်ဖို့ သာပြင်ထား..ဟိဟိ
Posted by saw at 01:34 1 comments
အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပါးများအား ဓားဖြင့် လိုက်လံထိုးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေ
မန္တလေး တိုင်း ဒေသ ကြီး၊ ပြင် ဦး လွင်မြို့ တွင် အသက် ၄၀ အရွယ် ခန့် အမျိုး သား တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားလာနေသည့် အမျိုးသမီး များအား ရွေးချယ်ကာ နောက်မှ လိုက်ပြီး အမျိုးသမီး များ၏ တင်ပါးအား ဓားဖြင့် ထိုးခွဲကာ ထွက်ပြေး သွားသော စိတ္တဇဆန်ဆန် ပြစ်မှု ကျူးလွန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း နှင့် အဆိုပါဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ် သက်၍ မြို့လူထုမှ စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက် ညနေ ၆ နာရီအချိန်ခန့်က ပြင်ဦး လွင်မြို့၊ ရပ်ကွက်ကြီး ၈၊ ပြည်သာ ယာလမ်း၊ အမှတ် (..)နေ မ.. (၃၈) နှစ်သည် နှစ်နှစ်အရွယ် သမီးကို စက်ဘီးပေါ်တွင်တင်၍ ကံ့ကော် လမ်းအတိုင်း စက်ဘီးကိုတွန်းလာ စဉ် တောရ ရွှေစည်းခုံ ဘုန်းကြီး ကျောင်းအနီး အရောက်တွင် အသက် ၄၀ အရွယ်ရှိ အမျိုးသား တစ်ဦးက
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 06:090comments
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ကွေးကြီးကုန်းကျေးရွာမှု လေဖြတ်နေသောအဘိုးအိုတစ်ဦး မီးလောင်သေဆုံးခဲ့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ကွေးကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီ မိနစ် ၃၀ ခန့်ကမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ နေအိမ် (၃၀) ခန့် မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး လေဖြတ်နေသောအဘိုးအိုတစ်ဦး မီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 05:040comments
ရန်ကုန်- မန္တလေး လမ်းတွင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်၊ လူ ငါးဦး ဒဏ်ရာရ
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 08:440comments
"ဖျော်ဖြေပွဲမှ ရရှိငွေ ၁၂၆ သိန်းကို ၄၂ သိန်းစီ သုံးပုံခွဲပြီး လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဆောင်းဦးလှိုင်" ဆောင်းဦးလှိုင်က “ နှလုံးသားတွေ လှူမယ့်ည” တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲမှ ပရိသတ်များ ချီးမြှင့်တဲ့ အနုပညာကြေး များကို နာရေး ကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်) နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား အဖွဲ့အား ပြန်လည် လှူဒါန်းပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီက မြောက်ဒဂုံ မြို့နယ်ရှိ နာရေး ကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ၈၈ မျိုး ဆက် ကျောင်းသားများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ လူပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆောင်းဦးလှိုင်က ဖျော်ဖြေပွဲမှ ရရှိငွေကျပ် ၁၂၆ သိန်းကို သုံးပုံခွဲပြီး နာရေး ကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ကို ၄၂ သိန်း၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား အဖွဲ့အား ၄၂ သိန်း လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ကျန် ၄၂ သိန်း ကိုတော့ အဆိုတော် အသစ်လေး များအတွက် ဖျော်ဖြေပွဲ လုပ်ပေးမယ်လို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 06:570comments
ခေါင်းတစ်လုံးအပို ပါလာသော မြန်မာပြည်မှကလေး ကျန်းမာေ၇းမကောင်း
ဒီလ (၁၁)ရက်နေ့ က တိုက်ကြီးမြို့ နယ်၊ ဘွတ်ကုန်းရွာမှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကူညီချင်တယ်ဆိုရင် ကိုဖြိုး ဖုန်း- ၀၅၅- ၂၉၂၉၈ ဥက္ကံမြို့ လရောင်စဉ် လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့့သို့ 
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 02:400comments
မလေးရှားကို အောက်လမ်းမှဝင်လာသော မြန်မာများ ကားချင်းတိုက်၍သေဆုံး
မလေးရှားနိုင်ငံကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ တစ်ဆင့် ၀င်ရောက်လာကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုး အများစုပါတဲ့ မော်တော်ယဉ်(ကားလေး) တစ်စီး ယဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် .........။
ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မှုခင်းဓါတ်ပုံတစ်ခုပါ ..
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 02:370comments
ကွန်တိန်နာကား တိုက်မိသဖြင့် အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံး(ကြောက်တတ်သူများမကြည့်၇)
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 08:110comments
သားဖြစ်သူက အမေကို ၀က်သားလှီးတဲ့ဓါးနဲ့ အပိုင်းပိုင်းခုတ်(မြန်မာပြည်)
မူးတဲ့ရူးတဲလူတွေသတိထားနိုင်အောင်လိုပါ (စစ်ကိုင်းတိုင်း ဖောင်းပြင်မြို့ နယ် သာစည်ကျေးရွာ)တွင် မိခင်ဖြစ်သူကိုသားဖြစ်သူမှဓားဖြင့်ဝက်ခုတ်သလို ရက်ရက်စက်စက် ခုတ်သတ်လိုက်တဲဖြစ်ရပ်ပါ
ကြောက်တတ်သူများ နဲ့ နှလုံးေ၇ာဂါရှိသူများ မကြည့်၇
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 09:130comments
မြန်မာပြည် တော်ဝင်စင်တာရှေ့က ATM စက်
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့က တော်ဝင်စင်တာရှေ့ အ၀င်ဝတွင် ATM စက်များ တပ်ဆင်ထားသည်ကို တွေ့ရစဉ်
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 05:430comments
ရန်ကုန်မြို့ကို စင်ကာပူကဲ့သို့ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ပြီ
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 05:150comments
မြန်မာ့အငွေ့ အသက်ပါသော လက်၇ာမြောက် ပန်းချီကားများ
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 10:260comments
ခန္ဓာကိုအောက်ပိုင်းချင်းဆက်နေသော ဘရာဇီးအမြွှာကို အောင်မြင်စွာခွဲစိတ်
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 21:190comments
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်၇ဲ့ကျောင်းသား၊သူများ ကြိုးစားမှုနဲ့ ဗဟုသုတ ဆောင်ပိုဒ်များ
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်က နိုဗယ်ဆုရှငိ(၃၃)ဦး ၊မေ၇ိကန်သမ္မတ(၇) မွေးထုတ်ပေးတဲ့နေ၇ာက ကြိုးစားနေပုံများ
မနက်( ၄ )နာ၇ီ ထပြီ စာကျက်နေပုံများ
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 19:340comments
အနိဌါရုံမြင်ကွင်းများ(မြန်မာပြည်) ကြောက်တတ်သူများမကြည့်၇ (၂ )
မြန်မာပြည်မှာ ဆိုင်ကယ်စီးလာ၇င်း..ကားနဲ့ တိုက်မိတဲ့ပုံ နှင့် နိုင်ငံခြား၇ာက် မြန်မာများ သေဆုံး၊သတ်ခံ၇ပုံများ ကြောက်တတ်သူများနဲ့ နှလုံးေ၇ာဂါရှိသူများ ဒီပို့ စ်အား လုံးဝ မဖွင့်ကြည့်ပါနဲ့ကြောက်စ၇ာပုံများပါ သတိပေးထားတယ်နော်
ဆိုင်ကယ် ကို ဦးထုပ်မပါပဲ စီးတော့ ဒီလိုတွေ ဖြစ်ကုန်ေ၇ာ
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 19:180comments
Maxဆီဆိုင် ငွေသိမ်းယာဉ် သိမ်ဖြူမီးပွိုင့်တွင် ငွေသိန်းရာချီ အလုခံရ
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 18:120comments
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရုတ်ဘာသာစကားက တရားဝင် ဒုတိယ နိုင်ငံခြား ဘာသာစကား ဖြစ်လာတော့မှာလား
မန္တလေးတံတားဦး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်အတွင်းပိုင်း တစ်နေရာကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလက တွေ့ရစဉ်
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 06:40 1 comments
ရုပ်ရှင်နှင့်ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင် မင်းအုပ်စိုး အရက်သေစာမူးယစ်သောက်စားမှု ကြောင့်တာမွေမြို့နယ် ဖိုးစိန်လမ်း Holly Day စားသောက်ဆိုင်ရှေ့လမ်းမတွင် ၁၅မိနစ်ခန့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ . ... ရုပ်ရှင်နှင့်ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင် မင်းအုပ်စိုးမှ အရက်သေစာမူးယစ်သောက်စားပီး သစ်ပင်များအား မီးရှို့ခဲ့ သဖြင့် လာရောက်မီးငြိမ်းသတ်ခဲ့သော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အော်ဟစ် ဆဲဆိုခြင်း လုံခြုံရေးလုပ်ငန်း လာရောက်လုပ်ဆောင်သော တာမွေမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ ရဲကား ၇ခ။ ၁၇၂၄ ယာဉ်အား လက်သီးဖြင့်ထိုးသောကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ပိုင်ယာဉ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သဖြင့် ပ-၇၆/၂၀၁၂ ပုဒ်မ ပပက ၆၁ ဖြင့် လည်းကောင်း ရရ/၂၀၁၂ ပုဒ်မ ၂၉၄/၃၅၃ ဖြင့် ဒုရဲအုပ် အောင်ကျော်ထွန်း တရားလိုပြုလုပ်ပြီး အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရှိရ/လည်းကောင်းအနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရှိ ရဲစခန်းများတွင် အမှုပေါင်း ၁၁မှုကျူးလွန်ထားကြောင်း သိရသည်။
နောက်တပုံတော့ မိန်းကလေးတွေ မကြည့်နဲ့ နော် အောက်ပိုင်းဗလာပုံ
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 02:460comments
ယနေ့နံနက် (၇)နာရီခန့်တွင် ရန်ကုန်မှ သံတွဲသို့ ပြေးဆွဲနေသော Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်တစ်စင်းသည် သံတွဲလေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်စဉ် မတော်တဆမှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဆိုပါ မတော်တဆမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
သံတွဲ မြို့ မဇင်လေယာဉ်ကွင်းသို့ ၁၇.၂.၂၀၁၂ နေ့ နံ နက် ၁ဝနာရီခွဲ ခန့် အချိန်တွင် Air KBZ လေယာဉ် အဆင်းတွင် ဟိုက်ဒရောလစ် ဘီးစနစ်များချို့ယွင်း၍ ကွင်းလယ်လောက်ကပင် ဝမ်းဗိုက်နှင့်ဆင်းသက်ခဲ့ ရသည်
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 22:120comments
ဒီနေ့ မနက် ၆ နာ၇ီ ၄၀ မှာ အမေစု ဖျာပုံကို စထွက်လာပုံနဲ့ ဖျာပုံမှာစောင့်မျှော်နေသူများ
လာပြီဟေ့..............ဖျာပုံေ၇..............(ပုံတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီဖော်ပြပေးနေပါသည်)
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 20:540comments
သေ၇မယ့်အချိန်သိပေမယ့် ..သတ္တိခဲမလေး ၁၃ နှစ်
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 05:340comments
မုံရွာမြို့ မှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကလက်ကျန်ဗုံး၇ာနဲ့ ချီတွေ့ 
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 05:230comments
လူသေအလောင်းအားတစစီ ခွဲစိပ်ကြည့်ပြီ အသုဘကမ္မဌါန်းရှု့ နေသော ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးများ(သတိ ကြောက်တတ်သူများ မကြည့်ရ)
( နှလုံးေ၇ာဂါရှိသူများနဲ့ ကြောက်တတ်သူများ ) ဒီပို့ ကို လုံးဝ(လုံးဝ) ဖွင့်မကြည့်ပါနဲ့အောက်တွင် ဖော်ပြထားသောပုံများသည် လူသေတယောက်အားခွဲစိပ်နေပုံများဖြစ်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ လူသေအား ၇င်ဘတ်အား စပြီ ခွဲစိပ်လိုက်ပုံပါ
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 03:290comments
တောဘု၇င်ခြေင်္သေ့နဲ့ေ၇ဘု၇င် မိကျောင်းတို့ ၇ဲ့ သူနိုင်ကိုယ်နိုင်တိုက်ခိုက်ပုံများ
ကုန်းပေါ်ကို နယ်ကျွန်းလာတဲ့ မိကျောင်း ခြေင်္သေ့အုပ်နဲ့ တွေ့ ပြီ
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 03:14 1 comments
ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တ၇ ချစ်ဇတ်လမ်းလေး..
ချစ်သူေ၇ တသက်လုံး မခွဲမခွာပဲ ချစ်ဖို့ဂတိ် ပေးပါတယ်ချစ်၇ယ်
မင်းအတွက် ချစ်သူများနေ့အမှတ်တ၇လေး လက်ခံပေးပါ
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 06:290comments
( လေးစာစွာ ဂုဏ်ပြု အပ် သော် တို့ ချစ်ရသော ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း) (အမှတ်တရ)
ကဲ... သူ အသက် ကို စတေး ပြီ တိုင်းပြည် နဲ လူမျိုး အတွက် တိုင်းတစ်ပါးသား လက် ထဲကနေ တိုင်းပြည် ကို နည်မျိုးစုံ နဲ့ပြန်လဲ ရယူပေးခဲ့တယ် ......
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 10:010comments
ချစ်သူများနေ့ နဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေျးမှု့ (ဒီပုံတွေဟာမြန်မာပြည်စစ်စစ်ပုံတွေပါ)
ကဲ.. ဒီပုံက အနောက်နိုင်ငံမှာ မဟုတ်နော်..ရွှေမြန်မာပြည်မှာပါ..ဒီလို လူမြင်ကွင်းတွေမှာတောင် အရှက်သိက္ခာ မရှိကြတော့တဲ့မြန်မာပြည် လူငယ် တွေရဲ့ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့စိတ်တွေထဲ မှာ အရှက်မရှိ ၊ကိုယ့်ကျင့်တ၇ားတွေတဖြည်းဖြည်း အေ၇ာင်တွေ ဆိုးလာတာ ဘယ်ကစ သလဲ....?
အများပြည်သူ လူကြီးမိဘတွေ ရှိနေတဲ့ ဘတ်စ်စကားပေါ်လည်း နားမလည်တော့ဘူး..ဒါတွေဘယ်ကစလဲ
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 06:203comments
မြန်မာပြည်မှာ အထက်လမ်းဆ၇ာက ကျောက်ခဲတွေကို ပြုစားခံ၇သူပါးစပ်ထဲက ကျအောင်လုပ်ပေးပုံနဲ့သ၇ဲမ၀င်ပူးသူကို မေးနေပုံတဲ့ ကြည့်ကြပါအုံးဗျာ
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 20:53 1 comments
လူသားကို ချက်စားကြတဲ့ သူတွေ (သတိ ကြောက်တတ်သူများ ၊ နှလုံးေ၇ာဂါရှိသူများ လုံးဝ မကြည့်၇)
လူသားကို တိ၇စ္ဆာန် တစ်ကောင်လို ချက်စားကြတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတခု လူရိုင်းတွေမဟုတ်ဘူးနော် ..တကယ် ကျကျနန ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတခု..အောက်ကပုံများကို ကြည့်၇င် သိနိုင်ပါတယ်...
ထပ်ပြောပါ၇စေ (နှလုံးေ၇ာဂါရှိသူများနဲ့ ကြောက်တတ်သူများ ဒီပိုစ့်ကို (လုံးဝ) လုံးဝ ဖွင့်မကြည့်ပါနဲ့အောက် မှာဖော်ပြထားတဲ့ ပုံတွေက ကြောက်စ၇ာ ၊ရွံ့ စ၇ာပုံတွေပါ
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 19:35 1 comments
ဒီနေ့ ပြည်ထောင်စုနေ့အမှတ်တ၇
ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ.မှာ ကျရောက်မယ့် (၆၅) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ. ကို စည်းလုံးခြင်းအတွက် သီချင်းတစ်ပုဒ် ဆိုတဲ့ တေးသီချင်းလေးနဲ. ဂုဏ်ပြု ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 18:300comments
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 18:29 1 comments
သံတွဲမြို့ရှိ ဒွါရဝတီဈေးကြီး မီးလောင်ခံရပြီး ကျပ်သိန်းပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံး (သတင်း-ဓါတ်ပုံ)
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 05:410comments
မြန်မာအမျိုးသမီးပါးရုိုက်တဲ့ဂျပန်ကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေး ဗီဇာပိတ်
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 07:11 1 comments
မကြာခင် မြန်မာပြည်မှာ ဘိုးတော်ဆိုသူက စုန်းေ၇ာဂါ ၊ကျောက်ခဲအန်တဲ့ ဗွီံဒီယိုကို စပ်မိစပ်၇ာ သူငယ်ချင်းများ အတွက် တင်ပေးသွားပါမယ်
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 07:57 1 comments
ချစ်သူများနေ့ အတွက် အာလူးကြော်
ငါကလည်းကောင်း မင်းကလည်းကောင်း (နေပါအုံးငယ်ချင်း၇ာ)
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 07:400comments
တိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှ အသက် ၇၄ နှစ်အရွယ်ရှိအမျိူးသားကြီးတစ်ဦးဟာ အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ်ရှိ
ပြည့် တန်ဆာအမျိူးသမီးကြီးတစ်ဦးနှင့် အတူအိပ်စက်ကာလိင်ဆက်ဆံနေစဉ် သွားအတုအား
အမှတ်မထင်၊ မတော်တစ်ဆမြိုချခဲ့ မိသဖြင့် သေဆုံးသွားခဲ့ ရပါတယ်...
ချန် ဟုအမည်ရှိသည့် အဆိုပါအမျိူးသားဟာ လွန်ခဲ့ သည့် နှစ်က ဇနီးဖြစ်သူနှင့်ကွာရှင်းခဲ့ ပြီး
နောက်ပိုင်းတွင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည့် အမျိူးသမီးမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့် တိုင်ပေ မြို့ သစ်တွင် အ
ချန် ဟာသူမနှင့် မိနစ် ၃၀ ကြာအတူပျော်ပါးခဲ့ တယ်လို့ ပြည့် တန်ဆာအမျိူးသမီးကပြောကြား
စားလို့ ၇တယ်ဆိုတိုင်း စားတော့ ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့ ...
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 07:29 1 comments
ကဲ ကြည့်ပါအုံး အိန္ဒိယ အမျိုးသမီးတယောက်မွေးတာ ၁၁ မွှာပူးတဲ့
တခါထဲမွေးလိုက်တာ ဘောလုံးတသင်းစာ လောက်ပဲ တချက်ခုတ် ၁၁ ချက်ပြတ် ဟ..ဟ
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 03:192comments
ထူးထူးခြားခြား ပုံများ (ဖိုတိုရှော့ မဟုတ်ပါ) ( ၂ )(ရွံတတ် သူများ မကြည့်၇)
အစာကိုမြိုပြီ ဇိမ်ယစ်နေတဲ့ မြွေကြီး
Posted by စပ်မိစပ်၇ာ at 03:160comments
၇ယ်စ၇ာဇတ်လမ်းလေးနဲ့ဟာသပုံများ
အနိဌါရုံမြင်ကွင်းများ (မြန်မာပြည် ပြည်တွင်း) ကြောက...
အနိဌါရုံမြင်ကွင်းများ ( ပြည်ပ) ကြောက်တတ်သူများမကြည...
ကိုင်း ဒီလိုအစားအသောက်တွေ စားကြမလား
ထူးထူးခြားခြား ပုံများ (ဖိုတိုရှော့ မဟုတ်ပါ) ( ၁ )...
မင်္ဂလာဆောင်မှာ နာေ၇းကူညီမှု့ အသင်းကို ကူညီပြီဒါနယူခဲ...
မြန်မာပြည်သူတွေ ဖုန်းဈေးပေါပေါကိုင်၇ဖို့ဝိုင်းဝ...
လှိုင်သာယာ အလယ်ရွာမှ ယနေ့ မနက် မီးလောင်မှု့ ကြီး
ပြည်ပေ၇ာက်နေသူတွေအတွက် အလွမ်းပြေ ကျိုက်ထီးရိုး ဘု၇...
မြန်မာပြည်မှနေ၍ နိုင်ငံခြားဖုန်းများသို့အွန်လိုင...
အမေစု၇ဲ့ ပုသိမ်ခ၇ီး ဓါတ်ပုံများ
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေမူကြမ်း အတည်ပြုရင် တချို့ကုမ္ပဏီတွေက ...
MAIလေကြောင်းလိုင်းအား ဗုံးဖောက်ခွဲရန် ခြိမ်းခြောက်...
ထူးထူးခြားခြား ပုံများ (ဖိုတိုရှော့ မဟုတ်ပါ) ( ၂ )...
ကဲ ကြည့်ပါအုံး အိန္ဒိယ အမျိုးသမီးတယောက်မွေးတာ ၁၁ မွှ...
လူသားကို ချက်စားကြတဲ့ သူတွေ (သတိ ကြောက်တတ်သူများ ၊...
မြန်မာပြည်မှာ အထက်လမ်းဆ၇ာက ကျောက်ခဲတွေကို ပြုစားခံ...
ချစ်သူများနေ့ နဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေျးမှု့ (ဒီပုံတွေဟြာ...
( လေးစာစွာ ဂုဏ်ပြု အပ် သော် တို့ ချစ်ရသော ဖခင်ကြီး...
တောဘု၇င်ခြေင်္သေ့နဲ့ေ၇ဘု၇င် မိကျောင်းတို့ ၇ဲ့ သူနို...
လူသေအလောင်းအားတစစီ ခွဲစိပ်ကြည့်ပြီ အသုဘကမ္မဌါန်းရှု ...
မုံရွာမြို့ မှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကလက်ကျန်ဗုံး၇ာနဲ့ ချီ...
ဒီနေ့ မနက် ၆ နာ၇ီ ၄၀ မှာ အမေစု ဖျာပုံကို စထွက်လာပံ...
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းအုပ်စိုး အ၇က်မူးပြီ ၀တ်လစ်စ...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရုတ်ဘာသာစကားက တရားဝင် ဒုတိယ နိုင...
Maxဆီဆိုင် ငွေသိမ်းယာဉ် သိမ်ဖြူမီးပွိုင့်တွင် ငွေသ...
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်၇ဲ့ကျောင်းသား၊သူများ ကြိုးစားမှုနဲ ...
ခန္ဓာကိုအောက်ပိုင်းချင်းဆက်နေသော ဘရာဇီးအမြွှာကို အော...
သားဖြစ်သူက အမေကို ၀က်သားလှီးတဲ့ဓါးနဲ့ အပိုင်းပိုင်...
ကွန်တိန်နာကား တိုက်မိသဖြင့် အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံး(ေ...
မလေးရှားကို အောက်လမ်းမှဝင်လာသော မြန်မာများ ကားချင်...
ခေါင်းတစ်လုံးအပို ပါလာသော မြန်မာပြည်မှကလေး ကျန်းမာ...
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ကွေးကြီးကုန်းကျေးရွာမှု လေဖြတ်နေ...
အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပါးများအား ဓားဖြင့် လိုက်လံထိုး...
ကိုင်း မြန်မာပြည် စစ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းေ၇း(ကြောက်တတ်သ...
ပြင်ဦးလွင်တွင် အမျိုးသမီးတင်ပါးတွေကို ဓားဖြင့်ထို...
အရပ် တစ်ပေ ၁၀ လက်မသာရှိသော နီပေါအဘိုးအို ကမ္ဘာ့အပုဆ...